Bit By Bit - Okwu Mmalite - 1.4.2 Mfe n'elu complexity
Mgbagwoju research nwere ike mgbe o doo onye ọ bụla nke ihe ijuanya. Ọ bụrụ na ị na-eche banyere na-agbanwe agbanwe uche, mgbe ahụ, gị nnyocha kwesịrị mfe.
Social nchọpụta na dijitalụ afọ a na-ejikọta ya na complexity, dị ka fancy algọridim na ọkaibe Mgbakọ. Nke a dị mwute n'ihi na kasị doo anya na-elekọta mmadụ research bụ mgbe mfe. Na-doro anya, dị mfe nnyocha abụghị otu dị ka mfe nnyocha. N'eziokwu, ọ bụ mgbe nnọọ ike ike mfe nnyocha.
The kasị mkpa mere na-ahọrọ dị mfe nnyocha bụ na ọ bụ nanị ụzọ kee mmadụ kweta, na-atụghị anya ya pụta. Dị ka ihe atụ, were ya na ị dị nnọọ mụụrụ nnyocha ụfọdụ na-eji dị nnọọ mgbagwoju ụkpụrụ. Ọ bụrụ na gị pụta kwekọọ gị anya, ị ga-eleghị anya-anabata ha. Ma, ọ bụrụ na gị pụta dị iche iche na ihe ọ tụrụ, i nwere abụọ nhọrọ: na-anabata na-atụghị anya ya pụta ma ọ bụ obi abụọ mgbagwoju ụkpụrụ. My maa bụ na ị bụ yikarịrị ka hà ga-enwe obi abụọ mgbagwoju ụkpụrụ. Nke a na-eme ka n'ụzọ zuru okè,, ma ọ pụtara na ihe mgbagwoju na ụkpụrụ, na o yiri ka ọ na-emepụta na-atụghị anya ya pụta na ị ga-ekwere. E nwere mgbe ụzọ pụrụ nnọọ mgbagwoju na naanị ihe ya pụta na i nwere ike ikwere bụ ndị nke dakọtara ị na-atụ anya. N'oge ahụ, ndị nnyocha ka furu efu ihe dị oké mkpa: research ga-enwe ike gbanwee obi gị.
Nsogbu na m na dị nnọọ kọwara bụ mgbe ihe siri ike mgbe ị na-amalite ịgbalị ịgbanwe onye ọzọ n'obi. Were ya na-eweta dị nnọọ mgbagwoju mpempe nnyocha nke nwere na-atụghị anya n'ihi na onye ọzọ. Na onye na-adịghị nọrọ ọtụtụ ọnwa na-ede gị koodu na-arụ ọrụ site na gị data n'ihi ya, mgbe ha nwere mkpebi ndị oke nke n'ịnabata na-atụghị anya N'ihi ma ọ bụ n'enweghị obi abụọ mgbagwoju ụkpụrụ, ha na-fọrọ nke nta ka na-aga inwe obi abụọ mgbagwoju ụkpụrụ. Ọ bụrụ na ị na-eche banyere n'igwa onye ọzọ na-agbanwe ha n'obi, mgbe ahụ, gị nnyocha kwesịrị ịbụ mfe.
Mfe nnyocha na-abịa site a eke kwesịrị ekwesị n'etiti ajụjụ na data; ndị ọzọ okwu, ezi research imewe. Ogbenye research imewe, Otú ọ dị, na-eduga ná jọrọ njọ complexity na-abịa site ndinyanade mbịne gị data ka a ajụjụ nke na ha anaghị mma ruru eru. Akwụkwọ a na-elekwasị anya abụọ na-eru nso ka ike a eke kwesịrị ekwesị n'etiti ajụjụ na data. Akpa, akwụkwọ a ga-enyere gị ịjụ ezi uche ajụjụ gị data. Nke abụọ, akwụkwọ a ga-enyere gị na-anakọta nri data zaa gị ajụjụ.